UTim Cook kwinyani eqinisekisiweyo: "Sigcina imali eninzi" | IPhone iindaba
UTim Cook kwinyani eqinisekisiweyo: "Siyaqhubeka nokutyala imali kakhulu"
UTim Cook uxelele abatyali mali izolo ukuba I-Apple iya kuqhubeka nokutyala imali kwinyani eqinisekisiweyo Kwaye inkampani ithatha obu buchwephesha njengomsebenzi wexesha elide. Impendulo kaCook yeza emva kokubuzwa malunga nomdlalo womzuzu, i-Pokémon GO, endinokulinga ukuthi ngumdlalo wokuqala, kwanesicelo, esonwabele impumelelo yokwenene ngolu hlobo lwetekhnoloji.
I-CEO ye-Apple ithi Lines GO sisampulu yento eyenzekayo xa kusenziwa izinto ezintsha kwaye seso sizathu sokuba bakhuthaze abaphuhlisi ukuba "bacofe iqhosha" ukuze banikeze imveliso ethandwa kwihlabathi liphela. Ngokwam, ndicinga ukuba uCook ulungile malunga nokusetyenziswa kwezinto ezintsha, kodwa ndicinga ukuba impumelelo yesihloko sikaNiantic samva nje sinxulumene nomxholo wayo kunokwenza izinto ezintsha.
I-Apple iphanda ngeNyaniso eNdisiweyo, kodwa kwikamva
I-RA inokuba nkulu ngokwenene. Siye kwaye siyaqhubeka sityala imali kakhulu koku. Singene nzulu kwi-AR kwikamva lomsebenzi wexesha elide kwaye siyakholelwa ukuba kukho izinto ezintle kubathengi ababalaseleyo kunye nelona thuba lishishini likhulu. Into yokuqala kukuqinisekisa ukuba iimveliso zethu zisebenza kakuhle kunye neemveliso zabaphuhlisi abanjengoPokémon, kwaye seso sizathu sokuba ubone ii-iPhones ezininzi ezinje ngokuleqa iiPokémans (ewe, kwathiwa "iiPokémans").
UCook ukholelwa ukuba iAugmented Reality inokuba njalo iqonga elilandelayo kwaye abayi kusindisa nanye imizamo yokwenza njalo. Ukuba izalisekisa into ebithenjisiwe, olu hlobo lwetekhnoloji alunakusoloko lusetyenziswa kwiselfowuni, kunjalo ke i-Apple CEO iyavuma ukuba izakusungula isixhobo esitsha? Ndicinga ukuba iiglasi azikho mnandi xa kunganyanzelekanga ukuba sinxibe iiglasi, kodwa nokuba sizifuna ukuze sifumane okuninzi kwi-AR.
Njengoko uTim Cook esitsho malunga notyalomali kwinyani eqinisekisiweyo, iApple inayo wathenga iinkampani ezininzi ezinokubanceda baphuhlise isoftware kunye nezixhobo, ezinje ngeMetaio, Flyby Media okanye Faceshift. Ukongeza, kukwavakala ukuba baneqela eliphanda ngokufihlakeleyo (elifihlakeleyo ...) elisebenza ngokukodwa kwiNene eliNgezelelweyo kunye neNyani eyiyo. Into embi ngayo yonke le yinto yesiqhelo, ekuya kufuneka silinde ukubona ukuba iguqulela ntoni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » UTim Cook kwinyani eqinisekisiweyo: "Siyaqhubeka nokutyala imali kakhulu"